လြှောကျလှာ | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
Sierra AirPrime EM MC မိုဘိုင်း Broadband လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေးကော်နက်ရှင် Manager ကို
နိုဝင်ဘာလ 28, 2017 admin ရဲ့ 0
အင်တာနက် Sierra Broadband module ကို Connect ကို ~ သင့်ရဲ့ PC မှာ run နေ Windows ကိုမှ AirPrime EM / MC စီးရီး module တွေချိတ်ဆက်ဖို့, သငျသညျကွန်နက်ရှင်မန်နေဂျာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ပတ်သက်ဆက်စပ်နေသောတွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်ကို USB driver ကို install ကျေးဇူးပြုပြီး ... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Blu-Ray BD DVD CD ဗွီဒီယိုပလေယာဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအခမဲ့ရယူပါ
နိုဝင်ဘာလ 19, 2017 admin ရဲ့ 0
Blu-ray disc (အတိုကောက် bd) အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းရည် data တွေကိုသိမ်းထားဖို့ DVD ကိုအပြီး disc ကိုကို formats ၏နောက်မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်. Blu-ray disc ဖြစ်ပါသည် […]
သြဂုတ်လ 31, 2017 admin ရဲ့ 0
Hard Disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့သင့်ရဲ့ပါဝါကိုပြန် Give ငွေရတတ်သောသူ-featured partition ကိုမှော်, disk ကိုအသုံးပြုမှုပိုကောင်းအောင်နှင့်သင့်ဒေတာတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော. ဒါဟာသင်လုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်သည့်နှင့်အတူဤမျှလောက်များစွာသောအစွမ်းထက် features တွေနှင့်အတူကြွလာ ... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ကင်မရာကိုပြတင်းပေါက် OS အတွက် universal UVC ကို USB ဗီဒီယိုအတန်းအစားယာဉ်မောင်းအဆင့်မြှင့် utility ကို
ဇူလိုင်လ 18, 2014 admin ရဲ့ 0
ဤမျှလောက်များစွာသောမောင်းသူက device အတွက်ပေါင်းစည်းသို့မဟုတ် system ကို operate, ဒါပေမယ့်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်ကွိုးစားအားထု can`t. ယခု UVC ကားမောင်းသူဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ device ကိုထိရောက်မှု upgrade ပါလိမ့်မည်. (UVC ကို USB ဗီဒီယိုအတန်းအစားယာဉ်မောင်းကသာ UVC device ကို suppoert) အကယ်. ... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
WINDOWS တွေအဘို့အ Kodak Camere ဝေမျှမယ် Button လေးက App ဆော့ဖ်ဝဲကို XP vista7 အနိုင်ရ 8
ဇူလိုင်လ 1, 2014 admin ရဲ့ 0
ဒီဆော့ဗ်ဝဲ Kodak ကင်မရာအဘို့ကိုသာကိုက်ညီ. operating System ကိုအသုံးပြုပုံများ: WINDOWS 8, WINDOWS 7, Windows Vista, Windows XP Download ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ. (Password ကို : os-ကြီးများ) ဗားရှင်း: ပြည်သူ့ ဘာသာစကားပံ့ပိုးမှု: အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်,... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
processor ​​ကို စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ဥပဒေရေးရာအနက် စီပီယူ Software များ HD Graphics စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ 64-နည်းနည်းက Windows Samsung က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Technology_Internet မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Nokia က OS ကို-STORE device ကိုမော်ဒယ် ပရိုဆက်ဆာ နည်းပညာ
processor ​​ကို Sony Ericsson က ဥပဒေရေးရာအနက် Nokia က Samsung ရဲ့ Galaxy Samsung က HD Graphics စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Intel က HTC က နည်းပညာ မိုဘိုင်းဖုန်း Software များ OS ကို-STORE Intel က Server ကို Qualcomm မှ device ကိုမော်ဒယ် 64-နည်းနည်းက Windows စမတ်ဖုန်းများ Technology_Internet ပရိုဆက်ဆာ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စီပီယူ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု